Esi kwupụta ịhụnanya maka nne na nna
"Ezigbo nne na nna, nmalite amalitela, na ị nọ ndụ nke mgbochi a na-atụkwasị obi ..." Okwu ndị a dị mfe na-ezochi eziokwu miri emi: ndị mmadụ bụ ndị dị anyị nso site na ọbara bụ nchekwa na nkwado kachasị adabere n'oge ndụ siri ike. Na maka ihe ndị anyị na-amaghị, ọ bụ ndị nne na nna ka anyị na-echefu ikwu maka ịhụnanya, na n'eziokwu mgbe ụfọdụ, ọdịdị dị otú ahụ na-enyere aka ịmekọrịta mmekọrịta ...
• Nke mbụ , ihe kachasị mkpa bụ icheta na igosipụta mmetụta gị adịghị mkpa maka oge. Ee, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ikwu n'ihu ọha "M hụrụ gị n'anya!". Nkwupụta a nke ịhụnanya na-eweta ihere na ihere nke nwata. Ma i nwere ike ime ka obi ruo gi ala.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe nne nne ahụ na-etu ọnụ banyere pancakes ọhụrụ, anyị na-adụ aro ọ bụghị nanị, na-atụgharị ha n'otu n'otu, na-ekwu okwu na-azaghachi, ma na-ekwusi ike, sị: "Lee ka m si hụ nne nne m n'anya, karịsịa maka ndị dị mma!" Mgbe nne m na-enye aka ịkwanye ụlọ osisi ahụ ite ohuru ma o bu keta uzomume ohuru ohuru na ekwentị, egbula oge ito ma mechaa tinye okwu ekele na mmata na ima.
• Nke abuo , chee echiche: imeghe ihe nzuzo gị kachasị njọ bụ imechi ndị mmadụ. Ndị ị na-adịghị asọpụrụ ma hụ n'anya, na nke ị tụkwasịrị obi. Ya mere, soro nne gị kerịta ihe nzuzo gị, jụọ maka ndụmọdụ na ọnọdụ siri ike, gosi na echiche ya dị oke mkpa maka gị. Iche na ọ dị mkpa ma hụ ya n'anya bụ mmetụta na-emetụ n'ahụ ị nwere ike inye ndị mụrụ gị.
• Nke atọ , mụta inye onyinye n'enweghị ihe mere, dị ka nke ahụ, na obi gị dum. Na onyinye, n'ezie, isi ihe abụghị ụgwọ, ma anya, eziokwu nke ihe ị chere na ọ ga-adị mma ịme ndị mụrụ gị. O nwere ike ịdị ka ndepụta ego maka abụọ maka otu izu na obodo na-ekpo ọkụ, na etiti nwere foto nke mama na papa. Ọ dị mkpa inwe ike ịnakwere onyinye na ùgwù.
• Nke anọ , jụọ ndị nne na nna banyere ntorobịa ha, gbasara otú ha si dị na nwata. Mkparịta ụka ndị ahụ dị oke mkpa na-emekọ ọnụ na igosi ezi mmasị gị na ndụ ha.
• Nke ise , ọ bụrụ na ị bụ jaak nke ndị ahịa niile, emesola umengwụ iji mee ka mkpokọta foto nke ezinụlọ. Naanị iji belata, n'ezie, ị nwere ike ịnweta foto ndị dị na ọtụtụ mbipụta. Kwado T-uwe, kalenda, efere ma ọ bụ akwa na foto site na listi ezinụlọ gị.
• Nke isii , nri abalị na ndị òtù ezinụlọ bụ mgbanwe ọzọ na isiokwu nke nkwupụta. N'okwu mmepụta ngosi nke ngosi, ị na-ekpughe ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịme nri na nhazi, ma nwee obi eziokwu. A sị ka e kwuwe, a na-ejikwa ịhụnanya mee ka efere siere ya ike, nweekwa ike pụrụ iche ma nweta ezigbo uto.
Ịmara maka ịhụnanya maka ndị nne na nna adịghị achọ ka e si n'aka. Enweghị 100 bọọlụ dịka obi nke aha ha ma ọ bụ ihe odide ha dị na windo n'ihu windo ahụ. Maka ndị dị nso, ọ dị mkpa na ị gaghị echefu ụdị dị mfe, ma dị mkpa nke mmekọrịta, dịka okwu ịhụnanya.
Atụmatụ maka ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ: otu esi eme ka onwe gị mụta ihe
Njehie nke nne-n'ime
Achọrọ m ibi ndụ obi ụtọ mgbe ọ bụla
Kedu ihe m kwesịrị ime iji weghachite onye m hụrụ n'anya?
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ihe niile dị njọ ma ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ
Egwu. Otu esi emeso ya
Kedu ihe na-enweghị mmasị na otu esi apụ na steeti a?
Kedu esi ewepụ stains odo site na ajirija site na uwe?
Beelets na cheese
Nri nke Sofia Rotaru
Ihe omume kachasị dị irè maka ọnwụ dị egwu
Ịzụlite ihe okike n'ime nwata ahụ
Philip Kirkorov mere ka ndị uweojii jidere Didier Maruani
Ịhụnanya nke ndụ
Ime otutu otutu: ejima ejima
Kedu ka nwatakiri ga-esi nweta arọ n'ime afọ mbụ nke ndụ
Nwa ahụ anaghị eri nri n'ụbọchị
Njem onwe gị gaa London maka ụbọchị 3
Ọgwụgwọ na magburu onwe Njirimara nke jade
Ogo nke mmetụta nke nri nri E kwa onye
Ndụmọdụ onye ọkà mmụta sayensị: Ị ghaghị ikweta nkwenye?
Apple-yabasị casserole na skwọsh
Ngwurugwu asparagus na balsamic ihendori